Ukhonkolo kocingo Sectional is Sekuvamile ngaphezulu njengoba ucingo for izindlu zasemaphandleni ngezithukuthuku ukuqina, izinga kanye nokwethembeka. Ngesikhathi esifanayo ububanzi namuhla ukhulile kakhulu futhi ivumela ikhasimende ngalinye ukuthola lokho ekudingayo.
Ukuba khona izinguqulo eziningi kwenza kube nokwenzeka ukuba sihlanganise kocingo nge yindlu noma yimuphi umumo wokwakha. Phakathi kwabo kufanele basho lokhu okulandelayo:
umklamo Bilateral futhi sohlangothi olulodwa kanye nephethini impumuzo, indawo lapho akunamthelela nesibekandzaba.
Isikhala sayo esingaphakathi izakhi ngengozi noma izinhlobo ezahlukene.
Matte noma ngaphezulu ecwebezelayo kungenzeka bushelelezi bese eyama ngezinto zemvelo.
Kuyaphawuleka ukuthi sohlangothi olulodwa kocingo ukhonkolo intengo Sectional kancane ngaphandle ezimbili, okuyinto ngenxa yokuba yinkimbinkimbi kuqalisa. Kuyefana nasendleleni takhiwo umhlobiso eyengeziwe futhi belingisa izinto ezihlukahlukene.
Ezicijile zalolu hlobo kulula okwamukelekile ukuze ufake, okuyinto ngaphansi amandla ngamunye. Asikho isidingo ukuthola ithuluzi ezikhethekile futhi kubangele masters kanye Iqembu labakhi, kodwa namanje izandla extra kuyoba usizo olukhulu.
Okokuqala senziwa mshini kusayithi okucatshangwa indawo wokwakha. Isikhala sesango ukhonza njengoba yekucala. Indawo izakhi ukwesekwa imakwe ngezigxobo, ibanga elibahlukanisile kufanele kube cishe ezimbili amamitha.
Ukufaka izinsika kudinga ukumba emithonjeni ngamunye wabo. Umgodi etholwe ligcwele amanzi ungqimba ngesimo isitini othulini noma namatshana. Khona-ke, izinsika zixhunywe kahle futhi ahambisana ukugcwaliswa okwalandela ngodaka ukhonkolo. Isisindo kumele ukufriza ngokuphelele, okungase kuthathe izinsuku ezimbalwa, ngemva kwalokho ungakwazi uqhubekele umsebenzi olwengeziwe. Ukufakwa usuphothuliwe kokungathembeki panel e Slots. Uma kudingeka, ukhonkolo kocingo Sectional isicelo upende ungqimba.
Zonke izenzo ilula ngokwanele, naphezu kweqiniso lokuthi bamba afanele ukuphakanyiswa kanye isekela ikhambi kudinga isikhathi esithile futhi ngokucophelela. Nge amathuluzi adingekayo, ezifana semende, futhi lunikeza amapuleti amakhono kocingo zingenziwa ngokuzimela.
Isigaba wenza inqubo ekubunjweni ukhonza njengomdala isakhiwo ngesisekelo ngokhonkolo njalo nakakhulu, kwamiswa ngenxa okusezingeni eliphezulu amandla izakhiwo okuyinto. Zikhona nezinye izici eziningi ezinhle:
Ungakha udonga ukhonkolo njengoba Sectional okuqhubekayo kanye mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi, isibonelo izakhi ngehele ogibele phezulu nofana phasi.
Enkathini eyisikhathi ukusebenza, kutholakale izinga eliphezulu bewumsebenzi.
Ngesisekelo ukhonkolo akesabi okushisa aphakeme, ngokulandelana, lolu hlobo kocingo libhekwa njengoba engangenwa umlilo.
Ukungabikho ukunakekelwa eziyinkimbinkimbi.
Indaba akuyona ukungenwa izinguquko ezonakalisayo kanye kumiswa isikhunta.
Kuvele Ukukhetha olubanzi imibala kanye indlela yokwenza.
ukufakwa kuyashesha futhi kulula.
Sectional ezicijile ukhonkolo angadingi kumiswa isisekelo ngaphansi kocingo.
Ngaphambi ukukhethwa isixazululo eyakhayo kutfola injongo eyinhloko, kungaba umphelelisi design jikelele, ukwakheka kocingo umoya noma ukudala ukuphepha luhlobo esiphezulu.
Ezicijile Ukhonkolo bafaniswe akhethiwe kuye imisebenzi esemqoka ngesikhathi esifanayo kufanele acabangele ukuthungwa, umbala kanye izici ungqimba engenhla. Enough isixazululo ovamile uwukuthi ukuthenga umkhiqizo ne-look eqeda ukuthi akudingi supplements kanye efanelekayo ezungezile.
Ukhonkolo has a ukusatshalaliswa ukukhanya sokuqanjwa udayi, kuyoba njalo nokuba khona upende kufanele sinake imikhiqizo akudingeki sekugcineni. ongakhetha umoya mahle ukufakwa eduze ichibi njengoba ukuvimbela Isivuvu.
Sectional kocingo ukhonkolo: Izici
Asikho isidingo ukusebenzisa iziqobosho phakathi nokufaka namathuluzi okukhethekile ngokuhlanganisa izakhi ngoba umhlangano wabo kuyafana designer futhi wenziwa esebenzisa umshushuluzo ekhethekile okungukuthi ekusekeleni kwezinsika.
I panel ube mass ngokwanele ezinkulu, kodwa kukhona akhanya phakathi kwezinye ezivalekile ukwaziswa okufanayo. Sectional kocingo ukhonkolo, intengo kabani kwesigaba ngasinye ngokwesilinganiso 8,000 ruble, kuyinto emkhakheni ofanayo nge izinketho izinga metal.
On isisindo izakhi ngabanye ezithinta isibalo izimbobo, izilinganiso zobukhulu kanye namathuluzi ukuminyana elisekela. Ngokwesilinganiso kuba 50-80 kg, futhi ngokwenza kanjalo walenza kungenzeka ukufaka by abantu abambalwa, ngaphandle kokusebenzisa imishini ekhethekile, okuyinto edingekayo ukuze kwakheke ukhonkolo slabs Monolithic nokuba sekhaya futhi indawo ehlukile.
Ukhonkolo kocingo Sectional, okuyinto izinyathelo bathambekele 2000 x 50 x 500 mm, ngenxa isicelo vibration asakazwe indlela anayo oyiyo Bubbles kubathinta ezithinta izinga material. kocingo imingcele esizayo ikhiqizwa okusekelwe ukubaluleka jikelele.
A ezihlukahlukene isikhunta lisetshenziswe ukukhiqizwa, senze kube nokwenzeka ngathi ukuba khona okunezinhlobonhlobo elikhulu lwamaphethini.
Izakhi kungenzeka yayithonywe amasu ezimbili: emva ukugibela endaweni ekhethiwe noma ngesikhathi izakhi uxhumano emva solidification sokugcina substrate.
Indlela pokleit Wallpaper: Amathiphu Wabasaqalayo
ICongress of Berlin ngo-1878
Trimmers Stihl - ukukhetha ezigidi
I ewusizo amafutha - iqiniso nasezindabeni eziqanjiwe
The best imbewu isanqante. Izinketho ezihlukahlukene
Kungani umuntu ehlukumeza? Indlela yokunqoba amahloni nenjabulo